Nzira Dzekutanga Pakuparidza—Nhepfenyuro Dzeredhiyo Uye Lightbearer
MUNA 1933, hama dzakaronga kuti imwe nhepfenyuro yeredhiyo yaiva muJakarta itepfenyure hurukuro dzeChirungu dzakarekodhwa dzaHama Rutherford. Dzimwewo hurukuro dzaiva muchiDutch dzaiverengwa paredhiyo nemumwe murume aifarira chokwadi. Hurukuro idzi dzakaita kuti vanhu vakawanda vafarire uye izvi zvakaita kuti hama dzikwanise kupa vanhu mabhuku akawanda.
Nhepfenyuro yacho payakatepfenyura imwe hurukuro ine simba yaHama Rutherford yaiva nemusoro waiti “Muuyo Wegore Dzvene Parugare Nebudiriro,” vafundisi vechechi yeRoma vakarwadziwa chaizvo. * Vachishandisa vanhu vechechi yavo, vafundisi vacho vakaita kuti Hama De Schumaker avo vainge vaendesa hurukuro yacho yakarekodhwa kunhepfenyuro iyoyo, vapomerwe mhosva “yekumhura, kunyomba uye kuvenga.” Hama De Schumaker vakazvidzivirira zvakasimba pane zvavaipomerwa asi vakanzi vabhadhare 25 guilders * nedzimwewo mari dzemudare. Mapepanhau matatu ainge akakurumbira akataura nezvenyaya yacho, uye izvi zvakatoita kuti vanhu vakawanda vanzwe mashoko akanaka.
Musi wa15 July 1935, chikepe cheWatch Tower Society chainge chakareba mamita 16 chainzi Lightbearer (Mutakuri wechiedza) chakasvika muJakarta pashure pekunge chaita mwedzi 6 kubva kuSydney, Australia. Chaiva nemapiyona 7 aishingaira ayo ainge akatsunga kuparadzira mashoko akanaka muIndonesia, Singapore, neMalaysia.
Kwemakore anopfuura maviri, mapiyona akaenda neLightbearer kuzviteshi zvikuru nezvidiki zveIndonesia, achipa vanhu mabhuku akawanda anotsanangura Bhaibheri. Chikepe chacho pachaisvika pachiteshi chidiki chimwe nechimwe, “mapiyona aitora giramufomu oridza imwe yehurukuro dzaJ. F. Rutherford, uyo aiva purezidhendi weWatch Tower Society panguva iyoyo,” akadaro Jean Deschamp. “Chimbofungidzira kushamisika kwakaita vanhu vechiMalay pavakaona chikepe chakakura chichisvika munzvimbo yavo, vachibva vanzwa inzwi riri pamusorosoro richitaura. Kunyange dai vakanga vaona chitundumuseremusere vaisazomboshamisika zvakadaro.”
Kuparidza kwaiita hama idzi neushingi kwakashatirisa vafundisi zvekuti vakanetsa hurumende kuti ibhane Lightbearer kuti isasvika pazviteshi zvakawanda zveIndonesia. Muna December 1937, Lightbearer yakadzokera kuAustralia, uye vanhu vekuIndonesia vakaramba vachiyeuka kushingaira kwaiita hama idzi.
Mapiyona aishandisa Lightbearer
^ ndima 2 Hurukuro yaHama Rutherford yakafumura dzidziso dzenhema dzeChechi yeRoma, uye kupindira kwayaiita mune zvematongerwo enyika nezvebhizimisi.
^ ndima 2 Mari iyi inoenderana neUS$300 mazuva ano.